Joubertina, Eastern Cape, eMzantsi Afrika
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguElsje
UElsje unezimvo eziyi-42 zezinye iindawo.
Ubekwe kude phakathi kweentlambo ezimbini kwaye kufutshane nomlambo owomileyo uya kufumana i-Sink Shack yethu eyakhiwe ngokutsha, indawo yokufihla intloko, ilungele umntu othanda indalo ofuna loo mava okwenyani angaphandle-endle.
I-Sink Shack inika amava okwenene aseMzantsi Afrika, ebekwe kwindawo ezolileyo nenoxolo, engqongwe ziinduli eziqengqelekayo zefynbos kunye nezandi ezinoxolo zendalo, inika indawo yokubalekela ekhusini.
Ngaphandle kombono wokuzingca we-fynbos yemveli ngelixa usonwabela ikomityi yekofu esitopini, ityotyombe likwabonelela ngendawo yomlilo yangaphandle elungele ukwenza iinkumbulo ezikhethekileyo nosapho kunye nabahlobo ngelixa abancinci bakho bephonononga ezinye.
Ityotyombe elinesinki liplani elivulekileyo lokuhlala, indawo yokutyela kunye negumbi lokulala, lokulala iindwendwe ezi-6. Inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo lokuzilungiselela kwaye inendawo yomlilo yangaphakathi ebekwe embindini wegumbi lokuphumla elijonge isitephu kunye nemibono ejikelezileyo uya kushiyeka ufudumele kwaye upholile.
Ngenxa yendawo elikuyo ityotyombe, akukho mbane kunye namanzi ashushu, kodwa ukudala loo moya wasemaphandleni, indlu yangasese yangaphandle kunye neshawari ye-pully-system ifakelwe “kwidonki” ukuze ube shushu ngexesha lobusuku obubandayo basebusika.
Nangona umgama nje oyikhilomitha enye ukusuka kwindlu enkulu yaseFama, iTyotyombe lizimele kangangokuba ummelwane wakho osecaleni komnyango uya kuba ziinduli ezintle zeentaba zefynbos ezinatyiselwe phambi kwestophu.
Umbuki zindwendwe ngu- Elsje
Sifuna iindwendwe ziphumle kwaye ziya kusebenzisana kuphela xa zifuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Joubertina